Xinhua Myanmar - ကူးစက်မှုလှိုင်းအသစ်ဖြစ်ပေါ်နေစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံ၏ နေ့စဉ် COVID-19 ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်တက်
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ဈေးတစ်ခုအနီး သုံးဘီးကားဖြတ်သွားသည်ကို တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) WORLD
အဆိုပါ လူနာသစ်များအနက် ၉၆၄ ဦးမှာ ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများ ဖြစ်ပြီး အခြား ၃ ဦးမှာ ပြည်ပမှ ဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းတို့အနက် ၅၁၇ ဦးသည် လွန်ခဲ့သော ရက်အနည်းငယ်က ပြည်တွင်း၌ B.1.1.7 မျိုးစိပ်ကွဲ ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ရာ ညဈေးမှ အစုအလိုက်အပြုံလိုက် ကူးစက်မှုနှင့် ဆက်နွယ်နေသည့် ပြည်တွင်းကူးစက်မှုများ ဖြစ်ကြောင်း CCSA ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ချူလာလောင်ကွန်းတက္ကသိုလ် ကူးစက်ရောဂါဌာနမှ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးက ယခုတွေ့ရှိသော မျိုးစိပ်ကွဲသည် ယခင်မျိုးစိပ်ထက် ကူးစက်မှုနှုန်း ၁ ဒသမ ၇ ဆ ပိုမိုမြန်ဆန်ကြောင်း နှင့် ပြည်သူများအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်သမျှ ရောဂါကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်များကို ပိုမိုပြုမူဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထိုင်းပြည်သူများ ရိုးရာဆွန်ခရမ် နှစ်သစ်ကူးအားလပ်ရက်ပွဲတော် ကျင်းပရန် အသင့်ဖြစ်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ COVID-19 ရောဂါ လှိုင်းအသစ် ရိုက်ခတ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှု ဆက်လက် မဖြစ်ပွားစေရန် ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး အစီအစဉ်များကို တင်းကြပ်စွာ ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ယခုအချိန်ထိ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူ ၃၂,၆၂၅ ဦးရှိပြီး အပြည့်အဝ ပြန်လည်သက်သာပျောက်ကင်းသူ ၂၈,၂၁၄ ဦး ၊ လက်ရှိဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေသူ ၄,၃၁၄ ဦးနှင့် သေဆုံးသူ ၉၇ ဦးအသီးသီး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Thailand's COVID-19 cases hit daily high amid new wave of infections
BANGKOK, April 12 (Xinhua) -- Thailand on Sunday saw its highest daily record of 967 new COVID-19 cases largely due to cluster spreads in the capital and other provinces, according to the Center for the COVID-19 Situation Administration (CCSA).
A virologist from Chulalongkorn University warned that the variant would spread 1.7 times faster than the previous one and urged people to act inamore responsible manner.
The new COVID-19 wave came atatime when people were ready to celebrate the traditional Songkran New Year's holiday. Stricter measures have been implemented to preventafurther spread of the coronavirus.
The caseload in Thailand has hit 32,625, of which 28,214 patients have fully recovered while 4,314 others are currently hospitalized with 97 fatalities.
Photo - A tuk-tuk car passes throughamarket in Bangkok, Thailand, Jan. 20, 2021. (Xinhua/Rachen Sageamsak)
Previous Article ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံက တရုတ်နိုင်ငံမှ ဝယ်ယူခဲ့သော Sinovac ကာကွယ်ဆေးများ ထပ်မံရရှိ
Next Article အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ၌ COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွားသူ ၂ ဒသမ ၅ သန်းကျော် ရှိလာ